Chastisements Archives - Fanisana ho an'ny Fanjakana
Edson Glauber - Mivavaha fatratra
Ho tonga tsy ho ela ny fanaintainana sy ny fanenjehana
Simona sy Angela - Ho avy ny andro maizina
Fohy ny fotoana.
Hanova mandrakizay ny fiainanao ny hetsika lehibe.
Edson Glauber - Mianjera ny fahamarinana avy any an-danitra
Miova fo ary ny Tompo dia hamindra fo amin'ny tsirairay avy aminao sy ny fianakavianao.
Gisella Cardia - Hanao fiarovana ny rosary
Gisella Cardia - Ny zavatra ho avy dia ho mafy indrindra kokoa
Efa nanomana anao betsaka aho mandritra ireo fotoana ireo.
Edson Glauber -Hanahary Ho Kely tsy ho ela Amin'ny Hetsika lehibe
Ny fanjakan'ny ota rehetra dia ho ringan'ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra.
1 2 3 Manaraka "